Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3691 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3691 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3692 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3692 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Notice: Undefined offset: 1 in user_node_load() (line 3693 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3693 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Notice: Undefined offset: 73 in user_node_load() (line 3691 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Notice: Undefined offset: 73 in user_node_load() (line 3692 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Notice: Undefined offset: 73 in user_node_load() (line 3693 of /home/govmoep/public_html/modules/user/user.module).
Published: May 07 Posted Under: Ministry News
အမျိုးသားအဆင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးစီမံချက်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးရာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု မူဘောင်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု ပဏာမ လေ့လာသုံးသပ်ချက်မူကြမ်းအတွက် အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းအစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားစာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှင့် မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
“အမျိုးသားအဆင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးစီမံချက်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးရာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု မူဘောင်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု ပဏာမ လေ့လာသုံးသပ်ချက်မူကြမ်းအတွက် အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းအစည်းအဝေး” ဖိတ်ကြားစာ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ လျှပ်စစ်စွမ်းအား၀န်ကြီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမဲဆန်ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည်၏ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအား ရှင်းလင်းဖြေကြားချက်
ရှမ်းပြည်နယ်၊ အမှတ်(၂) မဲဆန်ဒနယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျော်ဇောသန်း၏ အဆိုအားပြန်လည် ဖြေကြားချက်
Published: Sep 23 Posted Under: Ministry News
ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သူရဦးအောင်ကို၏ မြန်မာနိုင်ငံစွမ်းအင်ဆိုင်ရာမူဝါဒကို လက်တွေ့ကျကျပြန်လည်သုံးသပ်စီမံဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့ တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုအပေါ်ရှင်းလင်းဖြေကြားချက်
ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သူရဦးအောင်ကို၏ မြန်မာနိုင်ငံစွမ်းအင်ဆိုင်ရာမူဝါဒကို လက်တွေ့ကျကျပြန်လည်သုံးသပ်စီမံ ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့ တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုအပေါ် အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဖျာပုံမဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးနိုင်၏ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအား ဖြေကြားချက်
လေးစားအပ်ပါသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး နှင့် တက်ရောက်လာကြသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နှုတ်ခွန်း ဆက်သအပ်ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းဝါနု၏ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအား ဖြေကြားချက်
နိုင်ငံတော်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးတက်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက် ဓာတ်အားထုတ် လုပ်မှု၊ ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှု၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု အပိုင်း (၃) ပိုင်းကို တပြိုင်နက်အချိုးညီ ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုအပိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာဓာတ်အားသုံးစွဲမည့် ဒေသအတွင်း၌သာ ဆောင်ရွက်ကြရပြီး ဓာတ်အားသယ်ပို့မှုတွင် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် များပါ ဖြတ်သန်းသွယ်တန်းကြရပါသည်။
Published: Sep 09 Posted Under: Ministry News
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း ) ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရဒေသ လောက်ကိုင် မြို့နယ်၊ ပြည့်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်နီနိုင်၏ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းအားဖြေကြားချက်
နိုင်ငံတော်၏ ကျောက်မီးသွေး အရင်းအမြစ်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်
နိုင်ငံတော်၏ လျပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများ နှင့် စပ်လျဥ်း ၍ရှင်းလင်းတင်ပြချက်
Published: Sep 06 Posted Under: Ministry News
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (JV/B.O.T) စနစ် ဖြင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တို့အပေါ် သက်ရောက်မှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထား
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (JV/B.O.T) စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တို့အပေါ် သက်ရောက်မှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများ